Baro isticmaalka qalabka qalinka ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | General, Tababarada, Kaararka kartoonka
Mararka qaarkood waxaan xaddideynaa adeegsiga qalabka aqoonta aan u leenahay awgood. Kuwa khubarada u ah maadada, waxay arki doonaan a aan dhammaad lahayn fursadaha naqshadeynta iyada oo loo marayo Photoshop, Sawire, Indesign, iwm. Laakiin shaki la'aan, inteena badan, ma ogin boqolkiiba boqol dhammaan fursadaha barnaamij barnaamijyada astaamahani ay na siinayaan. Qalabka qalinku wuxuu siin doonaa qaar badan oo iyaga ka mid ah.
Mar kasta oo aan isku dayno inaan ku ciyaarno hal qalab ama mid kale, waxaan ku dhamaaneynaa inaan iska dhiibno markaynu aragno in yoolalkayaga barnaamjiyada ah ee maskaxdeennu ka muuqdaan aysan ka muuqan karin shiraacdeenna madhan. Sababtaas awgeed, waxaan raadineynaa xulashooyin kale, xaaladaha badankood, ka soo jiidasho yar sidii aan markii hore u maleynay. Taasi waa sababta aan isku dayeyno inaan baranno sida loo isticmaalo waddooyinka.
1 Waa maxay Wadooyinku?
2 Aynu ku baranno aaladda qalinka
3 Waxaan adeegsaneynaa Qalabka Qalinka ee Freeform
4 La mid ah qalinka freeform, laakiin magnetic
Waa maxay Wadooyinku?
Waddooyinku waxay noo oggolaadaan inaan sawirno xargaha iyo xarriiqyada kuwaas oo wax laga badalay loona tarjumay sida walxaha vector. Lakabyada qaabeynta ayaa loo isticmaali karaa qalabka qalinka iyo qalabka Qaabaynta. TWaxaan sidoo kale abuuri karnaa wadiiqooyin u muuqan doona wadooyin shaqo oo ka mid ah "Wadooyinka" guddiga. Ugu dambayntii waxaan lahaan doonnaa suurtagalnimada abuurista qaabab caan ah oo aan midabeyn karno.
Markaad tahay isticmaale Photoshop, Khariidadaha qaabdhismeedka agabkan si looga saaro asalka waa naqaan. Loogu talagalay dadka isticmaala Adobe Illustrator, adeegsiga qalabka qalinku wuxuu faa'iido badan u yeelan doonaa bixinta wadooyin sax ah iyo abuurista qaabab asli ah SWaxay sidoo kale faa'iido u leedahay sameynta xulashooyinka, maadaama natiijada ay noqon karto mid sax ah.
Markaan abuureyno waddo, waxaan ku qeexeynaa bar barroosinka adiga oo riixaya gujis kasta oo aad sameyso, iyo sidoo kale khadadka jihada ee aakhirkoodu ku egyahay jihada haddii ay tahay waddo qalooca. Qeybta udhaxeysa labada qodob ee barroosinka waa qeyb. Toosan ama qaloocsan. Jidku wuu furmi karaa oo wuxuu yeelan karaa dhammaad ama xiri karaa, wuxuuna noqon karaa meerto.
Waddooyinka Photoshop-ka ayaa loo dhoofin karaa Sawirka.
Aynu ku baranno aaladda qalinka
Waxaan fureynaa sawir-qaade, waxaan sameyneynaa dukumiinti cusub oo maran ama muuqaal horey loo sii qeexay. Waxaan ku xulannaa qalabka qalinka qalabka guddiga ama si toos ah adigoo gujinaya 'P'. In kastoo aan wada ognahay durba. Qaybta qalabka, waxaan ku lahaan doonnaa dhowr ikhtiyaar: Jidka, qaabka iyo pixels.
Baafin: Qalabka qalinku wuxuu abuuri doonaa waddo shaqeyn vector ah oo ka muuqan doonta liiska galka dariiqa. Si aynaan u lumin wadooyinki aan abuurnay markii aan xireyno dukumiintiga laga hadlayo, waa inaan keydinaa.
foomka: Qalabkani wuxuu abuuri doonaa lakab qaab ah. Waan u tafatiri karnaa midabka qaabka aan ujecelnahay, midkastoo adeegsigiisa ah. Laba jeer dhagsii thumbnail ee guddiga 'Lakabadaha'. Sidoo kale ku dar saamaynta sida 'Drop Shadow', 'Bevel iyo Emboss', iwm
Pixels: Sida aad arki doonto, doorashadani had iyo jeer ma shaqeyso. Haddii aad tilmaamto qalabka qaabka markaa wuu furi doonaa. Waxay kaliya u shaqeysaa kuwaan. Laydilaad, ellipse, caadadii, iwm. Abuur lakab pixel ah halkii lakab sixid ah.
Waxaan adeegsaneynaa Qalabka Qalinka ee Freeform
Qalabkan foomka bilaashka ahi wuxuu noo oggolaanayaa inaan sawirno sawirro gacmo furan si deg deg ah. Dhibcaha barroosinka si toos ah ayaa loo dhigaa oo dib ayaan u hagaajin karnaa mar dambe. Waxaan ka dooran doonnaa qalabka 'Freeform Pen' qalabka wax lagu qoro.
Sidii aan horey u soo bandhignay, waxaan abuuri karnaa lakab ama Qaab-dhismeed ee xulashada sare. Si aad wax u sawirato, si fudud u riix oo u soo jiid sida qalin fudud, oo markii aad dhammeyso sawirka, sii daa badhanka. Dhab ahaan waa isku mid sida haddii ay ahayd sawir gacmeed.
Haddii aad sii deysay batoonka ka hor intaadan xirin qaabka ama wadada, dhagsii hal dhinac wadada mar labaad markale oo jiido.
La mid ah qalinka freeform, laakiin magnetic
Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa si la mid ah sida loo yaqaan 'magnetic loop'. - kaas oo aan mar dambe uga hadli doono maqaal kale oo ku saabsan - iyadoo la raacayo sida ugu macquulsan ee suuragalka ah muuqaalka sawirka.
Si aad u hesho qalabka, si xor ah u cadaato oo hayso qalinka, haddaba cinwaanka. Oo markii aan taas samaynay, baararka xulashooyinka sare, waxaan ku riixnaa 'magnetic'. Oo waxaad arki doontaa sida tilmaamuhu isu beddelo. Qalabkan waxaan ku dooran karnaa astaamaha 'qalab', ku hagaajin dulqaadka u dhexeeya 0,5 iyo 10. Gali qiyamka u dhexeeya 1 iyo 256 pixels si aad u go'aamiso aagga lagu ogaanayo xuduudaha.
Waxaan qeexi karnaa boqolkiiba ugu yar ee kala-soocidda ogaanshaha dusha. U adeegsiga qiime sare sawirrada ka soo horjeedka hooseeya. Cadee ogaanshaha soohdinka adoo galaya qiime udhaxeeya 0 iyo 100 aagga safka hore. Markay sare u kacdo qiimaha, ayaa si dhakhso leh heerka meeleynta dhibcaha.
Waxaan calaamadeyneynaa ikhtiyaarka Cadaadiska Qalinka, gaar ahaan haddii aan wax ka qabanno kiniin garaaf ah oo dibadda ah si aan u beddelno ballaca iyadoo ku xiran cadaadiska aan saareyno. Haddii aynaan haysan qalabkan, kama sii adkaan doonto in laga sameeyo a trackpad ama jiirka guud.
Waxaad ku isticmaali kartaa qaabab badan oo dheeri ah qalabka magnetka, sida sawir gacmeed bilaash ah sida qalinka bilaashka ah. Adoo gujinaya oo riixaya ALT PC ama CMD on Mac. Ogsoonow in ikhtiyaarkan uusan faa iido badan laheyn, maadaama Freeform Pen aad si toos ah u sameyn karto, laakiin waa ikhtiyaar kale. Waad sawiri kartaa qayb toosan, adigoo gujinaya ALT ama CMD mid ka mid ah geesaheeda oo xitaa xiro, adigoo gujinaya barta kale ee qeybta.
Oo ay ku jiraan tababarkaaga dhammaan xulashooyinka ku dhex jira qalabka qalinka, waxaad kuheli kartaa saxnaan badan iyo saameyn badan qaababka aad abuurto. Hadda, dhagsii qalabka oo bilow inaad bilowdo nidaamkaaga hal-abuurka ah, kaliya habkaas waxaad ku arki doontaa ficil ahaan dhammaan aragtida aan halkaan ku sharaxnay. Sameynta tijaabo iyo qalad adoon hagaajin dhaawaca.
Tilmaamahan waxay ku siin karaan fikrado, laakiin iyagu shaqada kuma qaban karaan adiga, markaa waad baran kartaa mid kasta oo iyaga ka mid ah oo naftaadana u sheegi kartaa. Xitaa weydiiso haddii aad wax su'aalo ah qabtid, asxaabta kale ayaa xallin kara walaacyadaas. Waxaad sidoo kale uhubeyn kartaa adigoo adeegsanaya qaabab horey loo sii qeexey oo aad iskudhaafaan kakanaanta Qalinka, taasi, ama aad si sax ah uhesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Baro sida loo isticmaalo qalabka qalinka ee Photoshop
Google ayaa badhanka "Arag sawirka" ka saartay natiijooyinka raadinta